မြစ်ဖျားခံရာ ဒီပညာ(ကဲ ကျနော်တို. ဘာတွေများလုပ်နိုင်ကြမှာလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » How To.. » မြစ်ဖျားခံရာ ဒီပညာ(ကဲ ကျနော်တို. ဘာတွေများလုပ်နိုင်ကြမှာလဲ
မြစ်ဖျားခံရာ ဒီပညာ(ကဲ ကျနော်တို. ဘာတွေများလုပ်နိုင်ကြမှာလဲ
Posted by ရာဇ၀င်လူဆိုး on Aug 5, 2011 in How To.. |5comments
ကျနော်တို. ဘာလုပ်ပေးမလဲ ၊?????
ကျနော်လေ့လာမိသလောက် ( ကျနော်အမြင်ပါ) လူတစ်ယောက်ရဲံ.ဘ၀မှာ ပညာဆိုတာ သစ်ပင်တစ်ပင်နဲ. နိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် ရေသောက်မြစ်ပါပဲ။ ရေသောက်မြစ်ကောင်းမှ ပင်စည်ကောင်းမယ်၊ ပင်စည်ကောင်းမှ အခက်အလက်ဝေဖြာမယ်၊ အခက်အလက်ဝေဖြာမှ အ၇ိပ်ခိုသူတွေအတွက် အေးမြသလို သူကိုယ်တိုင်လဲ တည်ငြိမ်စွာ၇ပ်တည်နိုင်ပါလိမ်.မယ်။ ပညာဆိုတဲ.နေရာမှာ ဘွဲ.ရမှ ဆယ်တန်းအောင်မှ ဆိုတဲ. ပညတ်ချက်တွေမဟုတ်ပဲ အသိပညာ ၊အတတ်ပညာ ၊ တွေးခေါ်မှုကအစ ထီးပြင် ၊ဖိနပ်ချူပ်၊ ဈေးရောင်း အထိ အားလုံက ပညာဆိုတဲ. အထဲမှာအကြုံးဝင်တယ်လို. ကျနော်ခံစားမိပါတယ်။
လောလောဆယ် ကျနော်တို့တိုင်းပြည်နဲ. အနီးစပ်ဆုံး ပညာရေးဆိုတာ လေ.လာကြည်.ရင်
၁။ အခြေခံပညာရေး (မူလတန်း မှ အထက်တန်းအထိ)
၂။အဆင်.မြင့် ပညာရေး (ဘွဲ.ကြို၊ ဘွဲ.ရ )
၃။ သက်တမ်းလွန်ပညာရေး (ပညာ တစ်ပိုင်းတစ်စနဲ. ကျောင်းထွက်ရသည်.လူငယ်များ )
၁။ အခြေခံပညာရေးတဲ.*** လူချမ်းသာ သားသမီးကတော. နိုင်ငံတကာ အဆင်ံ့မြင်.ကျောင်းတွေမှာ တက်လို.။ ဒါဆို သာမန် လက်လုပ်လက်စားနဲ. ဆင်းရဲသား လူတန်းစားတွေမှာတော့မူလတန်းကနေ အထက်တန်းအထိ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် ရုန်းကန်ပြီး ကျောင်းထားရတဲ. အဖြစ် မျက်စိရှေ.မှာ မြင်နေကြရမှာပါ….။ကျူရှင်မထားရင် မအောင်တဲ. စနစ်မှာ ငွေပုံအောရင်းနေရတဲ. ခေတ်လေ…ကျောင်းနေရမယ် အရွယ်မှာ လုပ်ငန်းခွင် ( သို. )လမ်းဘေးမှာ ရောက်နေတဲ. သူတို.လေးတွေက ယနေ.လူငယ် နောင်ဝယ်လူကြီးလေ..။ ဆယတန်းအောင်ပြီးတဲ.ကလေးတစ်ယောက်က ကြုံရာလုပ် ၀င်ငွေရှာပြီး အဝေးသင်နဲ. ဘွဲ.တစ်ခုယူတိုင်ပေမယ် ဒီလိုအရွယ်မရောက်သေးတဲ. ကလေးတွေက မိဘကျောင်းထားမှ တက်ရမယ် ဘ၀ပါ..မိဘကမှ မတတ်နိုင်တော.ရင် သတိူု. ဘ၀မှာ ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကုန်ကြမလဲ..။…ဒါဆို ဒီလို အခြေခံပညာက ကလေးတွေအတွက် တစ်ပိုင်တစ်နိုင်ကစပြီး အများကြီးအထိ ကျနော်တို. ဘာတွေများလုပ်ပေးနိုင်ကြပါ.မလဲ။ ( ကျနော် အမြင်တော. အခမဲ. ကျူရှင်၊ (သို.) တကယ် အခက်အခဲရှိနေသူများကို ကျောင်းထားပေးခြင်း အားဖြင်.ကူညီသင်.တယ်လို.ထင်မိပါတယ်)။ သူတို.လေးတွေက ကျနော်တို.မျိုးဆက်လေ…. နောက်ဆို တိုင်းပြည်ကိုပါ သူတို. လက်ကို ကျနော်တို. ထိုးအပ်ရမှာ….။
၂။ အဆင်.မြင်.ပညာရေးတဲ. **** ဘွဲ .ရ အလုပ်လက်မဲ.၊ ရတဲ. ဘွဲ.နဲ. အလုပ်က တစ်လွဲ၊ ၀ါသနာနဲ. ၀မ်းစာ နီးရာ ဓါးကြောက်နေရတာ ။ ဒီလိုအဖြစ်တွေ မြင်နေတွေနေကြတော. လူငယ်တွေ ပညာရေးကို အယုံအကြည် မရှိတော.သလို ဆယ်တန်းအောင်ပြီးရင်တောင် တစ်ချို.ဆို ဘွဲ.မယူတော.ပဲ ကြုံရာလုပ်ငန်းခွင်မှာ ရောက်နေတဲ.သူတွေ ဒုနဲ.ဒေးပါ။ တစ်ကယ်လို. သူတို.လိုလူငယ်တွေကို အဆင်.မြင်. ပညာရေးစနစ်တစ်ခု တည်ဆောက်ပေးနိုင်ခဲ.ရင် (သို.) အဆင်.မြင်.ပညာရေးတွေကို သင်ခွင်.ရအောင် ကူညီပေးနိုင်မယ် ၊ သူတို.ပညာ အတွေးအခေါ်ကို မြင်.မားလာအောင် လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်…။ သိပ်မကြာခင်မှာ သူတို.ကို ကျနော်တို.တိုင်းပြည်ကို ဦးဆောင်ခိုင်း၇မယ်လူငယ်တွေပါ..။ ( ကျနော် အမြင်တော. သူတို. အတွေ အခေါ် ပညာတွေမြင်.မားအောင် ဘက်ပေါင်းစုံက လုပ်ပေးနိုင်မယ် (သို.) နိုင်ငံခြား ပညာတော်သင်တွေရအောင် ကြိုစားပေးမယ် ကူညီပေးနိုင်ခဲမယ်ဆိုရင်)…. သူတို. အတွေးအခေါ် အတွေ.အကြုံ နဲ. အလုပ်အကိုင်ကအစမြင်.မားလာပြီး တကယ်ပညာတတ် လူငယ်တွေပေါ်ထွန်းလာမယ်လို. ကျနော် မြင်မိပါတယ်….။
၃။ သက်တမ်းလွန်ပညာရေး***ဆိုလိုတာက အလယ်တန်း အထက်တန်းလောက်နဲ. ကျောင်းထွက်ပြီး ကြုံရာလုပ်နေရတဲ.လူငယ်တွေကို ဆိုလိုတာပါ..။ ဥပမာ အလုပ်ကြမ်းတွေလုပ်ပြီး လောလောဆယ်ဝင်ငွေရှာနိုင်ပေမယ်. ဒီအတိုင်းတစ်သက်လုံးတော. သူတို.လုပ်နိုင်လိမ်.မယ် မထင်မိဘူး..။ အတွေးအခေါ်ချို.တဲ.သူမျိုးဆိုရင် ဒုစရိုက်ဘက်ကိုပါ ပါသွားနိုင်ပါတယ်..။ သူတို.တွေလဲ အနာဂတ်ရဲ.မျိုးဆက်တွေပဲလေ..။ ( ကျနော် အမြင်တော. သူတို.ကို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်တစ်ခုခုနဲ. ထိန်းကွပ်သင်.တယ်လို မြင်မိပါတယ်..ဒီလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်နဲ. သတို.ဘ၀ ရပ်တည် ၀င်ငွေ၇ှာ သူတို.မိသားစု သားသမီးတွေနဲ. ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးကို စောင်.ရှောက် ၊ ထောက်ပံ့ နုငိမယ်လို. ကျနော်မြင်မိပါတယ်)
ဒါက ကျနော်တစ်ဦးတည်း၇ဲ.ခံစားမိသလောက် အမြင်တွေဖြစ်သလို ဘယ်သူကမှ ပေးတာမဟုတ်တဲ. တာဝန်တစ်ခု ကျနော်တို. ပုခုံးပေါ်ရောက်နေတယ်လို. ခံစားရလို.ပါ။ ကဲ ကျနော်တို. တစ်ပိုင်တစ်နိုင်ကနေစပြီး ဟိုးအဝေးကြီးအထိ ဘာတွေများ လုပ်နိုင်ကြပါ့မလဲ…၊၊၊၊၊???????????????????????????????????????????
Do you really think our military government want
” တကယ်ပညာတတ် လူငယ်တွေပေါ်ထွန်းလာမှာ “.
They intentionally made ” လူထုကြီးကို ပညာမတတ်အောင် တမင် လုပ်နေတာ ”
They frequently said ” ပညာတတ်ရင် ဒုက္ခပေး လိမ့်မယ် ပုန်ကန်လိမ့်မယ် ”
Trust me ( my —— isasenior military officer & those saying was come from military generals & ministers, let say, from military inner circle ),
the military regiments which participated (ပုန်ကန်) in 1988 revolution are,
1. Medical ( ပညာတတ်, Doctors & all soldiers = 8 std passed )
2. Defense Industry ( ပညာတတ်, Engineers & all soldiers = 8 std passed )
3. Air Force ( ပညာတတ်, all soldiers = 8 std passed )
4. Navy ( ပညာတတ်, all soldiers = 8 std passed )
5. Paratrooper ( Lay Htee – 16 ) ( the best of bests (educated ပညာတတ်) in military )
Therefore, they really hate “ပညာတတ်”.
Dear Foreign Resident
I also think so but in future we don’t need to balme the government.
သတ်နေမှန်းသိရက်နဲ.တော. ငြိမ်ပြီးအသေခံနေရတာ သူတို.တော်လို.မဟုတ်တော.ဘူး.. ကျနော်တို. ကိုယ်တိုင် သုံးမ၇အောင် ညံ့လွန်းလို. ကျနော်မြင်တယ်။ ကျနော်တို.အားနဲ. ကျနော်တို. ကိုယ်.ပညာကိုယ်၇ှာ ကိုယ်.တက်လမ်း ကိုယ်ဖောက်ထွက်နိုင်ဖို.ပဲလ..။ ဒီမှာတစ်ခု၇ှိတာက သိနေ၊တတ်နေ ပြီးသား စီနီယာတွေ။ ကူညီပေးနိုင်သူတွေက နိမ်.ကျသူတွေကို ပြန်ဖေးမပေးဖို.ပဲ..။ ဒါက ခဏလေးမဟုတ်တဲ. ရေရှည်လုပ်ရမယ်ကိစ္စပါပဲ…
ဟုတ်ပါတယ် .. ရာဇ၀င်လူဆိုးပြောသလိုပါပဲ ..။ ကိုယ်တတ်ထားတဲ့ ပညာ ၊ အသိလေး တစ်ခုခုကို တခြားလူတွေကို ဝေမျှပေးနိုင်လျှင်ဖြင့် အလွန်အကျိုးများမှာပါ … ။ ကိုယ့်ထက်ပိုတော်သွားမှာ စိုးလို့ ချိုးနှိမ်ထားတာ သဘောထား ပြည့်ဝတဲ့ လူတွေရဲ့ လုပ်ရက်မဟုတ်ပါဘူး … ။ ကိုယ်တတ်ထားတာလေးသူများကို ပေးသိလို့ .. .ကိုယ့်အလုံးရင်းလျှော့သွားတာမှမဟုတ်ပဲ … ။
ဟိုအလှူ ဒီအလှူတွေ လုပ်နေကြမဲ့ အစား ပညာရေးနဲ့ ကျန်းမာရေး ကိုဇောင်းပေးပြီး လှူကြမယ်ဆိုရင် ဒီထက်ပိုပြီး တိုးတက်လာမှာလို့ ထင်မြင်မိနေကြောင်းပါ.. ရာဇ၀င် ထဲက လူဆိုးရေ…။ ခင်ဗျားကော သဘောတူရဲ့လား?
ကျနော်ကတော. သဘောတူပါ.ဗျာ..။ ဒါပေမယ့်လဲ ဒါက ကျနော်တို.ရဲ. ကိုယ်ပိုင် အတွေးတွေပါ..။ ရွာထဲကလူပေါင်းများစွာရဲ. အတွေးပေါင်းစုံနဲ. ကျနော်တို. ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဆက်လုပ်သင်.လဲ၊ ဘယ်လို လမ်းကြောင်းမျိုးနဲ့ မျိုးဆက်တွေကို မြှင်.တင်ပေးသင်.လဲဆိုတာ။..အတွေးတွေ ၊ အမြင်တွေ များလေလေ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်နိုင်လေပဲ အကို..။ ကိုယ်တိုင်မလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ရင်တောင် ဒီဆိုဒ်မှာ ၀င်ဖတ်နေတဲ. ထောင်ပေါင်းများစွာသော ပရိတ်သတ်တွေ ..ဒီလို အတွေးအမြင်တွေကို ကျနော်တို. ရွာထဲကနေ ရသွားစေချင်ပါတယ် အကိုရာ..